अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यी शहरहरु अवश्य घुम्नुहोस्
प्रत्येक वर्ष लाखौको संख्या पर्यटकहरु अष्ट्रृलिया घुम्न जाने गर्छन् । विश्वको प्रमुख पर्यटन सहरको रुपमा परिचीत अष्ट्रेलियाका यी सहरहरुमा आफ्नो मनलाग्दो एडभेनचर गर्ने तथा कला संस्कृति बुझ्न जाने मानिसहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो रहेको छ । हरेक सहरको आफ्नै विशेषता रहेको छ ।
अष्ट्रेलियामा रहेका रहेका उत्कृष्ट १० ठाउँहरुको विश्वभर उत्तिकै चर्चा हुन्छ । चर्चा पनि कनि नहोस यी स्थानहरु मनोरम दृश्यहरुले भरिएका छन् ।
यो ठाउँ दक्षिण अष्ट्रेलियाको राजधानीका रुपमा परिचीत रहेको छ । यो अष्ट्रेलियाको पाँचौ ठुलो सहर हो । १.२ मिलियन जनसंख्या रहेको एड्लेडको आफ्नै गुणहरु रहेका छन् । दक्षिण अष्ट्रेलियामा रहेका तीन भागभन्दा बढी मानिसहरु एडेले मेट्रोपोलिटन क्षेत्रमा बस्ने गर्छन् । यो सहरलाई अष्ट्रेलियाको प्रख्यात वाइन क्षेत्रहरुले घरेको छ । एडले हिल्स र गल्फ सेन्ट भिन्सेटको बिचमा समथर भाग रहेको छ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने यस ठाउँलाई सिटी अफ चर्चेज पनि भनिन्नछ । यस सहरमा रहेका भित्री कलाहरु उपनिवेश बेलाका रहेका छन् ।
उत्तरी भुभागलाई अगालेको डार्विन विश्वकै मुख्य सहरहरुमध्येको एक हो । हिन्द सागरलाई छोएका कारण अरु राष्ट्रहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएको छ यो सहरले । आवतजावतका लागि यो सहर केन्द्र हो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्रोसँग विनाशको शिकार भएको यो सहरले आफुलाई पुनजिवित गराएका थियो । आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन भन्दै डार्विन सहरले आफ्नो निर्माण थालेको थियो ।
आज ७५,००० हजारभन्दा बढी मानिसहरुको बिदा मनाउने ठाउँ बनेको छ यो डार्विन ।
होवर्ट अष्ट्रेलियन आयरल्याण्ड तास्मानियाको राजधानी सहर हो । सिड्नी पछि अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा पुरानो सहर हो होवर्ट । यहाँको जनसङ्ख्या २,५०,००० रहेको छ । अन्य सहरहरुको तुलनामा यो सहर निकै सानो मानिन्छ । सानो स्टेटको झल्को दिने खालको रुपमा होवर्ट रहेको छ । यहाँको कलाको कुरा गर्ने हो भने जर्जिन र भिक्टोरिन कलाले होवर्ट सजिएको छ । उदाहरणको रुपमा सलामन्का ठाँउलाई लिन सकिन्छ । यसको वेरहाउसमा टेरेस रहेको छ सन् १८३० को वेलिङ दिनहरुलाई यसले ताजा गराउने काम गर्छ ।
मौसमको कुरा गर्नु पर्दा मिल्ड टेम्परेट ओसनिक क्लाइमेट रहेको छ । त्यो पनि भिन्न चार सिजनमा ।
ब्रिसबेन क्विन्सल्याण्डको राजधानी सहर हो । यहाँको जनसंख्या २ मिलियन रहेको छ । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलवर्न पछि तेस्रो ठुलो सहरको रुपमा यो परिचीत रहेको छ । यो सहरको मुख्य विशेषता भनेको न्यानो मौसम, मनमोहक दृश्यहरु र रमाइला स्थानिय मानिसहरु नै हुन् । वार्षिक लाखौको संख्यामा आउने अन्तराष्ट्रिय पर्यटकका कारण यस सहरको विकास अत्यन्त तिब्र रुपमा भएको देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियाको दक्षिणपश्चिम कोस्टलाइनमा अवस्थित रहेको छ यो सहर । पर्थ अष्ट्रेलियाको चौथो ठुलो सहरको रुपमा परिचीत रहेको छ । यो पश्चिम अष्ट्रेलिया राजधानी हो । अन्य मुख्य सहर देखि एक्लिएको छ यो पर्थ । पर्थ विकासको आफ्नो विशेष विशेषता रहेको छ । यो ठाउँ निकै परानो जस्तो देखिन्छ तर यहाँको मौसम अत्यन्त मनोरम रहेको छ । युवाहरुले भरिएको वातावरण महसुस गराउँछ यो सहरले । यो सहरको जनसंख्या करिब २ मिलियनभन्दा बढी रहेको छ ।
भिक्टोरिया स्टेटको राजधानी हो मेलवर्न । अष्ट्रेलियाको दोस्रो ठुलो सहरको रुपमा परिचीत छ मेनवर्न सहर । अष्ट्रेलियाको दक्षिणपुर्वी टिपमा यो सहर अवस्थित रहेको छ । मेलवर्नलाई राष्ट्रकै सास्कृतिक राजधानीको रुपमा चिनिने गरिन्छ । हरेक कुरा निकै योजनाका साथ निर्माण गरिएका छन् यस सहरमा । सपिङ मल, फाइन रेष्टुरेन्ट तथा स्पोर्ट भेनुहरु योजना तथा आकर्षकका साथ निर्माण गरिएका छन् । राम्रो जीवन अनुशरण गर्नेहरुका लागि मेलवर्न घुम्ने एउटा राम्रो डेस्टिनेशनको रुपमा लिइन्छ ।
बिदा मनाउनका लागि एकदमै चर्चीत ठाउँको रुपमा परिचीत रहेको छ काइअन्स । उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको यो सहर अष्ट्रेलियाको स्टालिस सहरमा परिचीत रहेको छ । यो सहरको जनसंख्या करिब १,५०,००० रहेको छ । वाइल्डलाइफ डाइभरसिटी तथा एडभेन्चर ट्राभल गर्नका लागि यो सहर निकै प्रख्यात रहेको छ ।
३. अलाइस स्प्रिंङ्स
अष्ट्रेलियाको मुटुमा रहेको छ यो सहर । अष्ट्रेलियाको मुख्य सहर देखि १५०० किलोमिटर पर रहेको यो सहर अथा मनोरम दृश्यहरुले भरिएको छ । आदीबासी मानिसहरु तथा अनुशरण गर्ने खालका मानिसहरु यस स्थानमा बस्दै आइरहेका छन् । यो घुम्न आउने मानिसहरुका लागि मनोरम दृश्यहरुले भरिएको केन्द्रको सहरको रुपमा परिचीत सहर हो ।
सन् १९० को दशमा जब पर्यटकहरुको आगमन यस ठाउँमा हुन थाल्यो, यदी तथ्याङ हेर्ने हो भने २००० भन्दा बढी मानिसहरु यस ठाउँ घुम्न आउने गर्छन् ।
२. ग्रेट व्यारिअर रेफ
अण्डर वाटर एक्सपोलर र स्कुभा डाइभर्सका लागि यो सहर टप डेस्टिनेशनमा गनिन्नछ । यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो व्यारिअर रेफ सिस्टम भएको ठाउँ हो । अष्ट्रेलियाका क्विन्सल्याण्ड स्टेटमा यो सहर पर्छ । यस ठाउँ २९०० भन्दा धेरै कोरल रिफ्सहरु रहेका छन् । त्यस्तै सयौको संख्यामा आयल्याण्ड र केअज पनि रहेका छन् । मिलियन वर्षहरु लागेर बनेका यी रिफहरु अब विश्वकै सबैभन्दा धेरै डाइभर्स इकोसिस्टम भएको छ तथा अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा राम्रो स्थानको रुपमा यो ठाउँ परिचीत रहेको छ ।
अष्ट्रेलियाको दक्षिणी उत्तर कोस्टमा सिड्नी अवस्थित रहेको छ । न्यु साउथ वेल्सको राजधानी हो सिड्नी सहर । मोर्डन सहरको रुपमा परिचित यो सहरको पुरानो र लामो इतिहास रहेको छ । सिड्नीलाई सिनिक हार्वरको रुपमा समेत परिभाषित गर्ने गरिन्छ । हार्वर किनारमा यहाँका आदीबासीहरु बस्दै आइरहेको र उनीहरु नै पहिलो यहाँ बासिन्दा भएको मानिन्नछ । आज अष्ट्रेलियाको सिड्नीसहर विश्वकै चर्चीत सहरमध्येको एक हो । सन् १७८० को दशक पछि यसको विकास हुन थालेको बताइन्छ । सिड्नी हार्बर ब्रिज तथा सिड्नी ओपेरा हाउसले ती पुराना कुराहरुलाई याद दिलाउने गरेको बताइन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक स्थगित
गोदावरी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ। आज बिहीबार ३ बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगन भएको हो। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यथास
मस्को रूस। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार फिनल्याण्ड र स्वीडेनलाई चेतावनी दिदै यदि उनीहरूले नेटो सेना र सैन्य पूर्वाधारलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गरेमा मस्कोले ठुलै जवाफ दिने बताएका छन्।
चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्छः मन्त्री कार्की
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको २२औँ वार्षिकोत्सवक